Myanmar Defence Weapons: Myanmar Navy 559 FAC
kong May 31, 2011 at 6:53 AM
ဒီ manual AAGunတွေ၊ ARPA System Navigation Radar လောက်နဲ့ဘယ်
လေယာဉ်အမျိုးအစားတွေကိုပြစ်လို့ရမယ်ထင်ပါသလဲ၊world warII standard propellerလေယာဉ်လောက်နဲ့ helicopterလောက်ပြစ်နိုင်ပါလိမ့်
Defence myanmar May 31, 2011 at 2:41 PM
ထိုင်းရေတပ် HTMS Phutthaloetla Naphalai ရေယာဉ်မှာက Plalanx CIWS တစ် မိနစ်ကို ၃၀၀၀-၄၀၀၀ ကြားပစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ ၃.၆ ကီလိုမီတာ ထိပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်..။၂၀မမ ပြောင်းကို အသုံးပြုထားတာပါ။၁၉၈၀ ခုနှစ်ထုတ်ပေါ့ဗျာ..။ ပြီးတော့ Jianghu အမျိုးအစား စစ်ရေယာဉ်တွေမှာက ၃၇မမ ၂ပြောင်းတွေ..စကော့တလန်ထုတ် HTMS Makut Rajakumarn မှာတော့ ပင်လယ်ကြောင်လို့ အမည်ရတဲ့ လေယာဉ်ပစ် ဒုံးပျံပါဝင်ပါတယ်..။မီတာ ၅၀၀ ကနေ ၅၀၀၀ အထိပစ်ခတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်..။၄၀မမ ဘော်ဖော် အမြောက်က ၂ လက်နှင့်..ဒါကတစ်စီးပါ။နောက်ထပ် ကော်ဗတ်တွေ၊ တိုက်ခိုက်ရေးအမြန်ယာဉ်တွေမှာ လည်း ထူးထူးခြားခြားတပ်ဆင်ထားတာ မတွေ့ရပါဘူး။လေယာဉ်တင် သင်္ဘောနှင့် ခြိမ်းခြောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ရီစရာကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်..။ကျွှန်တော် ဆိုလိုတာက ဒီလိုပါ ရန်သူ့ရေတပ်ကို မိမိလေတပ်ကကော မဖျက်ဆီးနိုင်ဘူးလားဆိုတာပါ.(ပြောချင်တာ အခုမှ ရောက်တော့တယ်..)AAgun တွေဟာ လေယာဉ်ကိုဘဲ ပစ်ရတာ မဟုတ်ပါဘူး မြောက်-တောင်ကိုးရီးယား ရေတပ် စစ်ပွဲငယ် တစ်ခုမှာ မြောက်ကိုးရီးယား ရေတပ် လေယာဉ်ပစ် အမြောက်တွေက တောင်ကိုးရီးယား ရေယာဉ်ကို နှစ်မြုပ် ပစ်နိုင်ခဲ့တယ် မဟုတ်လားဗျ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရေတပ်ဆို ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ် ရေတပ် လက်နက်တပ်ဆင်မှုက အိုဟောင်းနေတဲ့ ဖရီးဂိတ်ကြီးတွေနှင့် ဆိုရင်တော့ ၅ စီးပေါ့ဗျာ အားရစရာကြီး..တကယ်လေ့လာကြည့်ရင် ရီးချင်စရာ ဖရီးဂိတ်ကြီးတွေဗျာ..။
knockout June 2, 2011 at 6:19 AM
ဗမာ့ ရေတပ် က Navy Day နီးလာရင် ..အဲဒီအရူးသွေးပါတဲ့ ဒါရိုက်တာတွေ အရူးသွေးပါတဲ့ မင်းသားတွေနဲ့ ..အရူးသွေး ပါတဲ့ ကကရေ အဖွဲ့ တွေပေါင်းပြီး ရူးကြောင်ကြောင်ရုပ်ရှင်တွေ ရိုက်တာ ခုထိပဲ ..အခုလဲ ကြည့် မင်း သားနှစ်ကောင်က Gun Drill လုပ်တာမဟုတ် ဘာမဟုတ် အမြောက်တွေ တောင်လှည့်မြောက်လှည့် လုပ်နေတဲ့ ကြားထဲမှာ စင်္ကြန် လျှောက်နေကြတယ်.. တကယ့် Reality ကို သေသေချာချာ မလေ့လာဘူး ..ကိုယ် ရိုက်ချင်ရာ ကို ရူးကြောင်ကြောင်ရိုက်ကြတယ်.တကယ်တမ်း Gun Drill လုပ် မယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ Deck တွေအပေါ်မှာ Gun Crew နဲ့Commander တွေ ပဲ တကယ့် တိုက်ပွဲ ၀င်နေတဲ့ ပုံစံ မျိုး လေးလေးစားစားနဲ့ တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ရတယ် ဆိုတာ
လောက်ကို တောင် မလေ့မလာ နဲ့ ရိုက်ကြတော့ ..ကြည့်ရာတာ ရွှေ
သွား တပ်ထားမှန်း သိအောင် လူမြင်တိုင်း သွားဖြီး ပြ နေသလို အဆင့်
အတန်း မရှိရုပ်ရှုင်တွေ ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ တွေ ပါ
အဆင့် အတန်း နိမ့်သလို ဖြစ်ရတယ်..။ ဒီ့ထက် ကောင်းတဲ့ ဇာတ်
ညွှန်း ဇာတ်လမ်း တွေနဲ့ ..တကယ့် လူစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်အောင် အား
ကျဖွယ်ဖြစ်အောင် ဒီနေ့ အချိန်ထိ မရိုက်နိုင်ကြဘူး ... အေးလေ .. စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဇာတ်လမ်း ဖြစ်အောင်ရိုက်ရင် ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်
ထောင်းတဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေ ပါဦးမှာကိုး ..အဲဒီတော့ အားလုံး လဲ လွတ်
အရူးသွေးပါတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေ Propaganda လုပ်ဖို့ သက်သက်ပဲ ရိုက်
ရတော့ ရေတပ်က ဗိုလ်တွေ နင်းကန် ပြီးဖွန်ကြောင်တာတွေပဲရိုက်ရ
knockout June 2, 2011 at 7:01 AM
ဘင်္ဂလား က တကယ်တမ်း ဗမာပြည်ရဲ့ Essential Enemy အဆင့်မ
ထားပါဘူးဗျာ.. ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း ဗမာပြည်က Essential Enemy အဆင့်ထားတာက ယိုးဒယားပါ .. ဘင်္ဂလား ရေတပ် နဲ့ ဗမာရေတပ်က တကယ်တမ်း အတူတူ ပါပဲ .. မဟာဗျူဟာမြောက် နိုင်ငံခြင်း ဖြစ်တဲ့ စစ်ပွဲတွေမှာ တိုက်ခိုက်ရေး သုံးနိုင်တဲ့အဆင့်မှာ မရှိပါဘူး .. ကမ်းခြေစောင့်နဲ့ ကာကွယ်ရေးအဆင့်လောက်ပဲ ထားနိုင်တာမျိုးပါ..ကမ်းရိုးတန်း အတိုင်းအတာနဲ့ ပြောရင် ဗမာပြည်က
ဘင်္ဂလား ထက် ကိုယ့်ကမ်း ခြေကို ကိုယ်ကာကွယ်နိုင်မှူ အများကြီး နည်းပါတယ်..။ လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးအဆင့် ရေယဉ်တွေ အနေအထားကိုကြည့်ပြီး သုံးသတ်မိတာပါ .. ယိုးဒယား ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှူ ကတော့ ဗမာပြည်ထက် အများကြီး သာပါတယ် တခု ပဲ ပြောစရာ ရှိ
တာက သူတို့ ရေပိုင်နက်အနေအထားအရ .. တကယ်တမ်း စစ်ဖြစ်
လာမယ်ဆိုရင် ရေယဉ်အုပ်စုတွေကို Mobilize လုပ်ဖို့ ခက်ခဲမှာ တခု
ပါပဲ..။ သေချာတာက တော့ ရေယဉ်ခြင်း ဖြစ်မယ့် တိုက်ပွဲတွေအတွက်
တော့ ယိုးဒယား ရေတပ်ကို ယဉ်လို့ ရနိုင်မယ့် သင်္ဘော ဖျက် ဒုံးကျည်
ရှိပေမယ့် Super Sonic ကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ တော့ ဗမာပြည်မှာ ရှိနေ
တဲ့ ရေယဉ်အနေအထားတွေနဲ့ ..ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်သလို ဗမာပြည်မှာ
ရှိတဲ့ Mig တွေကို ကာကွယ်ဖို့ လဲ သူတို့ ရေတပ်မှာ ရှိတဲ့ AA Gun
တွေလောက်နဲ့ တော့ မထိရောက်နိုင်ပါဘူး ..ဒါပေမယ့် လေယဉ်တင်
သင်္ဘော မှာ တပ်ထား တဲ့ Wall ကာနိုင်တဲ့ Rate of Fire မှီ
တဲ့ AA Gun တွေ လောက်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။ လေယဉ်
တင် သင်္ဘော တစီး ကို ဖျက်ပစ်နိုင်ဖို့ ဆိုတဲ့ Firing Power ဟာ ရေတပ် တခုတည်းသော်၎င်း လေတပ် တခုတည်းသော် ၄ င်း ဖြစ်
နိုင်ခြေအရမ်းနည်းပါတယ်.. ဒီဖက်ခေတ်မှာပါ.. လေယဉ်တင်သင်္ဘော
ဆိုတာ တကယ်တမ်း စစ်ပွဲ တခု ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင် တဲ့အထိ
အရေးပါတဲ့ Moving Strategic Base ကြီးပါပဲ .. အဲဒီလို
လေယဉ်တင်သင်္ဘော တစီး ဟာ စစ်ဆင်ရေးလုပ်ဖို့ .. သူ့မှာ ပါတဲ့
ရေယဉ်အုပ် အပြည့်ရှိရပါတယ် ..(ယိုးဒယားက လေယဉ်တင်သင်္ဘော ဆိုတာ တကယ်တမ်း Super sonic တွေ တက်လို့ ဆင်းလို့ ရတဲ့
သင်္ဘောမျိုး မဟုတ်ပါဘူး ယဟတ်ယဉ်တင် သင်္ဘောမျိုး ပါပဲ Vertical နဲ့ Short Take off တွေဖြစ်တဲ့ ဟယ်ရီယာလို F35 လို Super sonic ဆိုရင်တော့ ရပါလိမ့်မယ်) .. အဲဒီလို သင်္ဘော
မျိုးကိုဖျက်ဖို့ .. ဆိုရင် Mig နဲ့ ဖျက်ဖို့ မလိုပါဘူး ၈၀၂ တွေ နဲ့ တင်
အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် စစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင် များများစားစားမရှိတဲ့
ပိုင်ဆိုင်မှူ လေးတွေလောက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်လို့ မရပါဘူး .. Logistic
ဘယ်သူသာသလဲ အဲဒီအတွက် Infrastructure တွေဘယ်
လောက် တိုင်းပြည်အတွင်းမှာ ရှိသလဲ ဆိုတာ ကအဓိက အရေးပါပါ
တယ် .. သေချာတာတခုက ဗမာပြည်နဲ့ ယိုးဒယားစစ်ဖြစ်ရင် ကုန်း
တွင်း တိုက်နိုင်တဲ့ MBT တွေ SPH တွေ နယ်စပ်ကို မြန်မြန်ရောက်နိုင်
ဖို့ ဆိုတာ ယိုးဒယားအနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဗမာပြည်အတွက် တော်
တော် ဝေးနေပါသေးတယ်..ယိုးဒယားအနေနဲ့ ..၀င်သိမ်းမယ်ဆိုပြန်
ရင်လဲ သူ့ နိုင်ငံကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲကို
၀င်ဖို့ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဆီက လမ်းတွေ ပေါ်မှာ ယိုးဒယား ရဲ့ MBT တွေ လမ်းကျွံကျနေတာနဲ့ တင် အသုံးဝင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ..။
ဒါ့ထက် Geological Politic အရ ဗမာပြည်အတွက် တကယ့်
မဖြစ်မနေ သတိချပ်ရမယ့် ရန်သူဖြစ်နိုင်သူဆိုတာ တရုပ် တနိုင်ငံပဲရှိ
တယ် ဆိုတာ အမျိုးသားရေး အမြင် နဲ့ မမြင်သင့်ဘူးလား ဘော်ဒါတို့ 
ဒီလိုဆိုရင် တို့ တိုင်းပြည်နဲ့ တို့ စစ်တပ်ကို ဘယ်လို ပုံစံမျိုး တည်
ဆောက်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာလည်း ထည့်မစဉ်းစားသင့်ဘူးလား လို့ ပါ..
တကယ်တမ်း ဗမာပြည် ကလက်ရှိ စစ်တပ်နဲ့ ပါတ်သက်သမျှ လုပ်နေ
တာတွေဟာ အကျိုးမဲ့တွေချည်းဆိုရင် သိပ်များအဆိုးမြင်နေမလား ပဲဗျို့ 
.. စစ်တပ်အတွက် တင်မဟုတ်ပါဘူး ဗျာ ..တနိုင်ငံလုံးအတွက်ပါပဲ။
MM June 2, 2011 at 1:57 PM
ဟုတ်ကဲ့ပါ အစ်ကိုရေ အခုလိုဆွေးနွေးပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ယိုးဒယားရေတပ်ဟာ တကယ်တော့ ယခုရှိနေတာနှင့်တင် မလုံလောက်သေးပါဘူး ဘာကြောင့်ဆိုရင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ မြန်မာ၊ကမ်ဘောဒီးယား၊မလေးရှား စသည့်နိုင်ငံတွေရဲ့ ရေပြင်တွေနှင့်ဆက်စပ်နေတာပါ။ဒါပြင် ဗီယက်နမ် ရေပြင်နှင့်လည်းဆက်စပ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်..။ဒီတော့ မကြာသေးခင်ကမ တင်းမာမှုတွေနှင့် နယ်စပ်စစ်ဖြစ်ထားတဲ့ ကမ်ဘောဒီးယားလို နိုင်ငံမျိုးအတွက်ရော ရေတပ်ကို ဖြန့်ကျက်ချထားရပါတယ်..ဒေသတွင်းမှာ စစ်ကြီးဖြစ်ပွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ယိုးဒယားနိုင်ငံဟာ အရင်ဆုံးချေမှုန်းခံရမှာ သေချာပါတယ်...။မလေးရှားရေတပ်ဟာ အခုဆိုရင် အတော်ကို အဆင့်မြင့်နေပါပြီ။မလေးနှင့်လည်း နယ်စပ်မှာ ပြဿနာ ဖြစ်နေဆဲပါဘဲ..။မူဆလင်ခွဲထွက်ရေး ကိစ္စတွေက ရှိနေဆဲပါဘဲ..။ဗီယက်နမ်ရေတပ်ဟာ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေထဲမှာ အားအကောင်းဆုံးလို့တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်...။
“Ha ha, nói cũng đúng! Bổn tọa vốn chỉ là một thủ lĩnh sát thủ, thủ hạ tính đi tính lại cũng chỉ có năm sáu người mà thôi còn hiện tại thủ hạ đến mấy ngàn người… Thật là bận không chịu nổi.” Âm Vô Pháp tự giễu cười cười, nói: “Các ngươi cũng đi nghỉ ngơi thôi! Đi đường vất vả cả ngày cũng mệt đến ngất ngư rồi.”
*Chuột kéo rùa: nguyên văn là “Thử lạp quy” ý chỉ cảm giác bất lực (Biên).